Hafahafa daholo isika | Martech Zone
Hafahafa daholo isika
Alatsinainy, Septambra 26, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha vantany vao hitako fa voafetra ihany ny kopian'ny Hafahafa daholo isika amidy, fantatro fa tsy maintsy manafatra kopia iray aho. Ity no bokin'i Seth Godin farany ary manifesto kely mahafinaritra izy io.
Avy ao anaty tanany anatiny: Ny hevitr'i Godin dia ny safidy hanosika antsika rehetra hanaraka ny ara-dalàna eran'izao tontolo izao fotsiny hanampiana ny fivarotana fako bebe kokoa amin'ny besinimaro dia sady tsy mahomby no diso. Ny fahafahan'ny fotoanantsika dia ny manohana ny hafahafa, mivarotra amin'ny hafahafa ary, raha tianao, dia lasa hafahafa.
Miaraka amin'ny atiny ity kisarisary ity izay maneho izay fariparitan'i Seth Godin. Ny fanatontoloana, ny fizarana tsy lafo ary ny fampitomboana ny fifandraisana dia nahatonga antsika rehetra ho hafahafa toa antsika raha ny marina dia. Tsy tokony ho ara-dalàna isika - afaka mahita olona manana fahalianana, fialamboly ary tsiro toa antsika rehetra avy amin'ny vazan'izao tontolo izao isika.
Raha mifandraika amin'ny varotra maoderina, ny hafatra ao amin'ilay boky dia manakiana ahy araka ny fahitako azy. Betsaka loatra any no mampiasa media sosialy fantsona hafa ihany. Fanambarana reko foana ary diso tanteraka. Io ihany fantsona hafa ihany rehefa maniry handany ny fotoananao ianao amin'ny fividianana fomba iray hamakivakiana azy. lasibatra avy Tsy ny tetika tsara indrindra amin'ny media sosialy.
Ny orinasa dia manana ny loharano ary manana fotoana ahafahana manome ny hafahafa miaraka amin'ny toerana hivoriana, hizarana ary hifandraisana. Char-Broil's ny vondrom-piarahamonina sosialy dia tsy ny fivarotana grills, fa ny fampiarahana vondrom-pianakavian'olona izay saika mpivavaka be ny hetahetany. Raha vantany vao miroborobo io vondrom-piarahamonina io dia mankasitraka ny marika nanome azy ireo izy ireo ary farany dia hanaraka ny varotra.
Ny toerana novolavolain'ny orinasanao ho an'ny hafahafa handaminana dia tsy mila mifandraika amin'ny vokatra na serivisy akory. Ny orinasa hafa dia manao asa mahafinaritra mampiroborobo ny fiaraha-mikorana amin'ny fiaraha-monina, asa soa, hetsika na tanjona iraisana hafa.
Ny masoivohonay dia mampiasa vola be amin'ity bilaogy ity, ireo andian-dahatsary, fandaharana amin'ny onjam-peo ary manohana ireo hetsika isam-paritra sy nasionaly kendrena olona hafahafa toa antsika izay te hampiasa teknolojia ho an'ny marketing. Hafahafa izahay… aleonay miresaka kaody, API, fampiharana beta, Analytics ary mandeha ho azy noho ny lohahevitra marketing hafa. Tsy dia miresaka momba ny vaovao Facebook, Google+ na Twitter izahay… ireo lohahevitra ireo dia ara-dalàna ary afaka mahita bilaogy an-jatony miady amin'izany fifamoivoizana izany ianao!
Mifikitra amin'ny hafahafa izahay.
Boky mahafinaritra tokoa. Tiako ireo boky manazava ny zavatra ataonay ary manosika antsika hiasa mafy kokoa amin'izany. Araka ny lazain'i Seth, Ny tanjona dia ny hitady sy handamina ary hikarakara sy hitarika foko olona iray, handray ny hafanànany fa tsy hiady amin'izany. Manantena aho fa hanohy hanao izany isika!
Mba hanohizana ny fampiroboroboana an'ity resaka ity dia midira azafady ny pejy Meetup anay ary misorata amin'ny mailaka (etsy ambony). Tsy mila avy any Indianapolis ianao na dia eo aza ny hetsika isam-paritra napetraka ao. Hanomboka hanana webinar vitsivitsy sy hetsika virtoaly ato ho ato isika - angamba ilay voalohany, toa ny Tetikasa Domino fangatahana, dia ny hizara sy hifanakalo hevitra momba an'ity boky ity!
Sep 26, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
Toa be dia be amiko ny zavatra noresahin'i Dan Kennedy tao anatin'ireo lahatsariny farany. Resy lahatra aho raha toa ka maro ny orinasa / tompona orinasa no tsy manandrana hitovy amin'ny olon-drehetra ary mifantoka fotsiny amin'ny toetra mampiavaka azy ireo ary mizara ny tantarany sy ny fomba fijerin'izy ireo, dia ho hitan'izy ireo fa mipoitra ho azy sy ara-organika ny marika tena izy ireo. Ity boky ity sy i Dan dia toa manamafy izany. Mila maka kopian'ny bokin'i Seth aho!
Sep 26, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Scott, mila mijery an'i Dan Kennedy aho amin'izay! Te-hahita bebe kokoa amin'ny angon-drakitra lalina sy resaka momba an'io lohahevitra io aho.